Tag: windor jewelers | Martech Zone
Tag: windor jewelers
Satọde, Ọgọstụ 26, 2006 Na Tọzdee, Septemba 1, 2015 Douglas Karr
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụghị mgbe niile Marketing, Blọọgụ, malitere ịrịa Izi ozi, wdg Mgbe ụfọdụ, ọ bụ nnọọ oké ahịa ọrụ. Enwerem nche ncheta Fosil nke di m nso ma burukwa ya n’anya n’ihi na ụmụ m zụtara m otu ụbọchị ọmụmụ. Enwere m olileanya na ọ ga-adịru mgbe ebighị ebi. Batrị ahụ dịruru otu afọ ma ọ bụ abụọ. Batrị m gwụrụ ụbọchị ole na ole gara aga mana m na-etinye elekere ahụ. Kindda ụdị ogbi ma m mere ya n'ihi